दोस्रोपटक विहे गर्न लागेकि श्वेता खड्का भन्छिन् - अचानोको पीडा खुकुरीलाई थाहा हुन्न
मंसिर २१ गते, २०७७ आइतवार
6th December, 2020 Sun १५:३२:०८ मा प्रकाशित
आइतबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी छन्, ‘ अचानोको पीडा खुकुरीलाई थाहा हुन्नु भनेझैं समयको दुश्चक्रले ममाथि प्रहार गरेको अनेकन प्रहार र त्यसबाट मैले भोगेको पीडा केवल मलाई मात्र थाहा छ। म देख्थेँ, मेरो अगाडि लम्पसार परेर सुतिरहेको जिन्दगीको लामो बाटो जसमा तिखा काँडा, ठूलाठूला पत्थर अनि आगोको ज्वाला छरपस्ट भएर छरिएका छन् उनले लेखेकि छिन् ।'
'अचानोको पीडा खुकुरीलाई थाहा हुन्न' भनेझैं समयको दुश्चक्रले ममाथि प्रहार गरेको अनेकन प्रहार र त्यसबाट मैले भोगेको पीडा केवल मलाई मात्र थाहा छ।
'के म यसो गर्न सकुँला र?' आफैंसँग प्रश्न गर्थेँ। आफ्नै प्रश्नमा आफैंले उत्तर दिन्थेँ, कि हुत्ती हारेर मर्नु पर्छ कि त हिम्मतका साथ अघि बढ्नुपर्छ।'
'एक्लै जीवन काट्न सकिन्छ' भन्ने कठोर निर्णय लिएर विगत ६ वर्षदेखि एक्लै हिँडिरहेकी थिएँ म। मेरो यो एकल यात्राका बखतमा धेरैपटक लडेकी छु।
'अब उठ्नै सक्दिनँ कि' भन्ने कमजोर भावले थिचेको त्यो बेलामा आफ्नो हात समातेर उठाइदिने कुनै सहाराको आशा हुँदो रहेछ। महिनैपिच्छे करिब हप्ता दिनका लागि बिरामीको अवस्थामा पुग्ने मेरो शरीरले एक गिलास पानीसँगै औषधिको ट्याब्लेट मुखमा हालिदिने एउटा सहयोगको चाह हुँदो रहेछ।
'मेरो एकल जीवनलाई नियालिरहेका मेरा धेरै हितैषीले एउटा जीवन साथी खोज्नका लागि नसुझाएका पनि होइनन्। तर एकपटक पुछिएको सिउँदोमाथि पुन: सिन्दुर भर्न आँट गर्ने कुनै निःस्वार्थी हातहरू पाइन्छ र?
अनि विगतमा मैले गुमाएको मेरो चोखो मायालाई पुन: फर्काएर मेरो जीवनमा खुसीको रङ भरिदिने कुनै दयालु मन पाइएला र? लौ, भनेको जस्तो निःस्वार्थी, स्वच्छ र निष्कपटी व्यक्ति पनि पाइयो रे। अनि के यो पुरूष प्रधान समाजले मेरो दोश्रो जीवनलाई स्वीकार गर्ला र?' म मेरा हितैषीलाई प्रश्न गर्थेँ।
तर मेरा परिवारका सदस्यहरुको निरन्तर प्रयास अनि साथीसंगतीहरू, अग्रज र दिग्गज व्यक्तित्वहरु लगायत मेरा शुभचिन्तकले प्रदान गर्नुभएको हौसला, शाहस र प्रोत्साहनले आज म यो निर्णय लिनमा सफल भएकी छु। यति हुँदाहुँदै पनि मनमा एउटा प्रश्न भने अवस्य छ 'के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णयलाई स्वीकार गर्ला र?'
मलाई थाहा छ 'श्वेताको आँखामा आँशु मात्रै देखिनु पर्छ' भन्ने सोच बोकेका दुई चार-जना व्यक्तिहरूलाई मेरो यो निर्णयले पोल्नेछ।